EyeDwarha 16, 2018 admin
Chaos ijenali inzululwazi ithi Bitcoin ifana oyile kunye Dollar
A iphepha elitsha olupapashwe kwijenali yesayensi “chaos” kubonisa ukuba okungazinzi kweemalike cryptocurrency ifana kakhulu koko kulindelekileyo asethi zemveli njengamafutha negolide. Ngokutsho ku UStanisław Drozdz, omkhulu umbhali lesifundo kunye uprofesa e Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences, oku kuthetha ukuba iimarike Forex kungaba sijongene kukhuphiswano yokwenene evela cryptosphere.
Eli phepha ucacisa ukuba ezi ntsingiselo ingasiwa njengobungqina bokuba Bitcoin, yaye mhlawumbi nezinye iimarike cryptocurrency, usethubeni real ukuba iimarike rhoqo, kukhuphiswano oluthe ngqo kwimarike Forex. Plus, ukuba ababhali bathi ukuba cryptocurrencies zinika izimvo unique kungena iimpawu manani nokwanda market nemigudu, ngenxa data amaxabiso aphezulu rhoqo ukuba ifumaneka lula.
Australian amehlo karhulumente blockchain ngokuthenga impahla
Njengenxenye yesicwangciso ukubeka zonke iintengiselwano propati ibe kummandla digital, urhulumente New South Wales Australia i-ijikayo blockchain ubuchwepheshe. Kunye kurhulumente akuba yayalela yedijithi zonke iintengiselwano impahla ngoJulayi 1, 2019, NSW Land Iinkonzo Registry - nomsebenzisi titling kunye nokubhaliso nemisebenzi umhlaba karhulumente - uqala ubungqina-of-concept (PoC) izilingo ukuba uhlole ukuba blockchain yeyona ndlela engcono ukuya.
Ngecala zobugcisa yemigudu, arhente ibambisene ChromaWay Sweden-based ukuba aqhube i PoC kwiqonga yayo blockchain, kuphothulwe ekuqaleni konyaka ozayo. kungoku nje, lo mbiko, wonke umhlaba ukuba ibhalwe ngesandla kwaye ebhaliweyo ibe kwiirejista zoluntu. Yakuba inkqubo yedijithi lugqityiwe, ukuba uya kuba njalo kunye nezivumelwano iphepha akusayi kuphinda kuba semthethweni. Sokuqalisa yathi: “Iza kubonelela imbono epheleleyo ngakumbi olubanzi amalungelo omhlaba, izithintelo, kunye noxanduva, okuza kufezekisa izigqibo ukuba abadlali kwicandelo likarhulumente kunye nomhlaba, ukunika ulwazi ngaphaya kwalo, nokunciphisa phindwa data.”
Survey ibonisa 52% bezimali phezulu abaRhwebi zemveli bakulungele imali cryptocurrency
Kuphando entsha athwale umdla zesiqhelo in cryptocurrencies, LendEDU, Uqwalasela market-zimali zemveli. Iziphumo zibonisa ukuba 52% abaphendula kungenza ukuba basebenzise ii-akhawunti zazo labarhwebi imali cryptocurrency, Ukuba ukhetho wayekho, yaye 59% abatyali of traditional bakholelwa ishishini labo liya kunikela cryptocurrencies kwixesha elizayo.
the 1,000 Abaphenduli abadala waseMelika inxaxheba kwisaveyi azikho okwangoku kutyalwa cryptocurrencies. kunokuba, kwaba batyali-mali ubambe asethi zemveli, ezifana esitokisini bond. Bona abathengi of abaRhwebi ukuba azilufundisi utyalo cryptocurrency ngqo.
Abaphenduli ukubamba iingxelo kule abaRhwebi zilandelayo:
ukuthembeka - 17%
Brokers Interactive - 4%
Okunye - 12%
Abanini-akhawunti lubonise ukuba babeza uthemba labarhwebi emveli angaphezulu Coinbase ukuphatha crypto lwabo - 41% kuthelekiswa ne 14%. Kwakhona zaziza sithembele Amazon ngaphezu Coinbase - 39% kuthelekiswa ne 15%. Olu phando lubonisa ukuba abaRhwebi zemveli unokuzuza lukhulu lokuqala-umphambanisi ngokukwazi bamba combined 48% of abaphendula. Le saveyi online lwenziwe qho kwisithuba seentsuku ezintlanu-ukususela kuSeptemba 21 ku September 25, 2018.
Coinbase ivula ofisi Dublin
Coinbase ovule ofisi zalo ezintsha e Dublin, Ayalend. Ngokuvula i-ofisi entsha Irish, inkampani kulindeleke ukuba ukwandisa imisebenzi yayo kulo lonke European Union. Michael D'Arcy, uMphathiswa Irish for Iinkonzo zeMali and Insurance wathi: "Mna ndivuyiswa ukuba Coinbase uvula iofisi Dublin. Esi sigqibo iqaqambisa umnikelo kukhuphiswano nomtsalane Ireland kwiinkonzo zemali. "
Coinbase Lathetha "Kananjalo isicwangciso B for Brexit. Njengoko isicwangciso zonke iingozi ezinokubangwa, kubalulekile ukuba siqhubeke inkonzo abathengi bethu kulo lonke elaseYurophu, kunye Ireland wayeza kuba ukhetho wethu wesuka apho xa kufikwa kuyo. "
Hey Daily Team Altcoin, Cannab...
Post Previous:Blockchain News 15.10.2018
Post Next:Blockchain News 17.10.2018
EyeDwarha 27, 2018 e 3:54 PM